chris mutsvangwa on News24
ARTICLES RELATING TO CHRIS MUTSVANGWA
Zimbabwe's ruling party has ordered impeachment proceedings to begin against longtime President Robert Mugabe and expressed confidence that he could be voted out within two days, while the world's oldest head of state ignored the party's midday deadline to resign and instead summoned ministers to a Cabinet meeting on Tuesday morning.
President Robert Mugabe must leave office on Sunday, the head of Zimbabwe's war veterans association says, as pressure builds on the authoritarian leader to resign after a military takeover.
The leader of Zimbabwe's war veterans association, an influential voice in national politics, has said President Robert Mugabe must step down at once and urged people to protest against the veteran leader.
The faction riddled war veterans head Chris Mutsvangwa has called on the diaspora to help restore legitimacy and democracy in Zimbabwe following the sacking of vice president Emmerson Mnangagwa from his post
Zimbabwean war veterans, who have given President Robert Mugabe key support in past, have vowed to rally behind "competent" candidates in next year's elections even those from the opposition.
Just what are the "key lessons" that President Robert Mugabe's party has learnt from its shock loss of a by-election this weekend?
The leader of Zimbabwe’s former freedom fighters has lost his seat as a Member of Parliament after he was expelled from the ruling Zanu-PF party, the state-owned Herald newspaper has reported.
President Robert Mugabe's nephew, Patrick Zhuwao, has lambasted War Veterans Minister Christopher Mutsvangwa over attempts to block some politburo members from attending a meeting.
'Leave what you're doing and come to Harare,' war vets call for 'immediate' anti-Mugabe protests
Military 'should step back and allow people to oust Mugabe', says war vets leader
Zimbabwe's Movement for Democratic Change leader Morgan Tsvangirai and war veterans leader Christopher Mutsvangwa have reportedly flown back home from South Africa
Could it be that First Lady Grace Mugabe is feeling the pinch? Read this and other stories from Zimbabwe that you might have missed.
Zimbabwe’s former war veterans minister, Christopher Mutsvangwa, has blasted President Robert Mugabe over the recent arrests of two national executives of the ex- freedom fighters association, a report said over the weekend.
Zimbabwe's former freedom fighters have passed a vote of no confidence in Deputy President Phekezela Mphoko, accusing him of fanning factionalism and tribalism within the ruling Zanu-PF party, a report says.
Zimbabwe war veterans' leader, Chris Mutsvangwa, has accused newcomers of fomenting divisions within the ruling Zanu-PF party, a report says.